Fandriampahalemana – Fetin’ny Paska: polisy 3 000 mahery no hahetsika, ambenana ny trano fiangonana… | NewsMada
Par Taratra sur 16/04/2019
“Ho hentitra amin’ny fampanajana ny fitsipika… ny polisim-pirenena amin’izao vanin’andro fetin’ny Paska izao”, hoy ny tale jeneraly vaovaon’ny polisim-pirenena, ny kaomisera divizionera, Rakotozanany Dany Marius. Polisy maherin’ny 3 000 no hahetsika manerana ny Nosy, ambenana avokoa ny trano fiangonana an-dRenivohitra mandritra izao Herinandro masina izao…
Hiatrika avy hatrany ny fampandriam-pahalemana ny fetin’ny Paska raha vao nandray ny asany ity tale jeneraly vaovao ny polisim-pirenena ity. Fepetra telo lehibe ny nambarany ho an’ny besinimaro sy ho an’ny polisim-pirenena manontolo hoenti-miatrika am-pilaminana ity fetin’ny Paska 2019 ity. Voalohany amin’izany, mitohy ny asa fanabeazana ny olom-pirenena ataon’ny polisy hahafahan’ny tsirairay avy mahalala ny andraikiny ao anatin’ny fitandroana ny filaminana amin’ny ankapobeny. Faharoa manaraka izany, mandray fepetra manokana ny eo anivon’ny polisim-pirenena amin’izao ankatoky ny fetin’ny Paska izao sy mandritra ny fankalazana izany fety izany amin’ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ary indrindra, amin’ny fisorohana ny lozam-pifamoivoizana. Fahatelo farany, ho hentitra ny polisim-pirenena amin’ny fampanajana ny fitsipika rehetra sy ny arolohan’ny fifamoivoizana mandritra izao vanin’andron’ny fety izao. “Polisy maherin’ny 3 000 no hahetsika manerana an’i Madagasikara hiantoka ny fandriampahalemanan’ny fetin’ny Paska 2019. Hambenana avokoa ireo toeram-pivavahana rehetra an-tanàn-dehibe mandritra ny Herinandro masina”, hoy hatrany ny fanazavan’ny tale jeneraly vaovao ny polisim-pirenena.
Aoka mba hanaiky ny fandaminana rehetra…
Mandritra ny andron’ny Paska sy ny alatsinain’ny Paska kosa, ireo toeram-pitsangantsanganana rehetra mahavory olona sy toeram-pilanonana no hiandraiketan’ny polisy. Hanemotra ny arabe ny polisy handrindra sy hampanaja ny fitsipika mifehy ny fifamoivozana. Nanentana ny vahoaka tsy ankanavaka ity tale jeneralin’ny polisim-pirenena ity samy handray ny andraikiny avy ny tsirairay hisorohana ny loza sy hitandroana ny filaminana. Nangataka koa izy ny haneken’ny tsirairay avy ny fandaminana rehetra apetraky ny polisy mba ho Paska hieren-doza ity Paska 2019 ity. Miezaka manao izay ho afany amin’ny fitandroana ny filaminana sy hisorohana ny loza, araka izany, ny polisy. Aoka ho mailo hatrany mandritra ny Herinandro masina sy mandritra ny alatsinain’ny Paska, ametraho olona hatrany ao an-trano fa tsy kely lalana ny ratsy sao majifan’ny jiolahy ny fananana.